Budata Hunting Clash APK maka Android
Budata Hunting Clash
Budata Hunting Clash,
Chọrọ egbe mgbaaka ma ọ bụ ụta? Nhọrọ a bụ nke gị. Chụ nta na egbe na-ewu ewu karịa ịchụ ụta, ma ka ijiri ụta na-achụ nta ka bụ ihe a na-ahọrọ nke ọma netiti ndị na-achụ nta oge ochie, ọkachasị mgbe ha na-achụ nta.
Ma ị na-ahọrọ ịchụ nta site na egbe egbe ma ọ bụ ụta, ị ga-enwe ọtụtụ ndị na-akwado ịhọrọ. Nweta nkwalite gị égbè ngwá na igba ụmụ anụmanụ na a na-egbu egbu hit.
You na-ahụ ajị anụ ọhịa bea? You wolf post gị? Gịnị banyere ezi mgbada? Untingchụ nta anụmanụ ndị dị otú ahụ bụ ezigbo ihe ọ pleasureụ. Gbakwunye na ahịhịa mara mma mara mma, osisi na ọnọdụ ihu igwe dị mma. Yabụ nke nwere ezi uche na ị nwere ike ịnụ isi anụ anụmanụ ịchọrọ ịchụ nta.
Sochie deer, bunkers, aja aja bea, anụ ọhịa wolf, ọbọgwụ ndị ọzọ na anụ ọhịa. Họrọ anụmanụ, nzube na gbaa! Jikere maka ezigbo ahịhịa sinipa na anụ ọhịa.
Hunting Clash Ụdịdị
Mmepụta: Ten Square Games